Warbixin: Abwaan Yuusuf Shaacir Iyo Xifdigiisa Xagga Suugaanta. | Gacanlibaaxnews
Warbixin: Abwaan Yuusuf Shaacir Iyo Xifdigiisa Xagga Suugaanta.
December 19, 2017 - Written by C M
Sidee bay ugu fududaatay abwaan Yuusuf Shaacir inuu noqdo qof xafida oo korka ka haya suugaan badan sida silsilad-maanseedyo.
Halkan kaga bogta warbixin uu Cabdishakuur Xaaji Muxumed Muuse (Heersare) ka sameeyey xifdiga suugaanta Abwaan Yuusuf.
Diyaariye: Cabdishakuur Xaaji Muxumed Muuse (Heersare)